Efere tectonics tiori | Network Meteorology
Mgbe mbụ hụrụ na isiokwu nke Ọnye na -bụ Alfred Wegener? na Theory nke kọntinent, sayensị gara n'ihu ruo na, na 1968, nke ugbu a efere tectonics tiori. Ozizi a na-ekwu na ruo ọtụtụ ijeri afọ, efere nke akụkụ ala ya mejupụtara anọwo na-aga nwayọọ nwayọọ ma na-aga n'ihu.
Y’oburu n’acho ima ihe omimi di omimi, ana m akwado ka iga n’agu akwukwo a 🙂
2 Mmetụta efere
3 Ndabere nke tiori
4 Pesdị ụdị efere tectonic
Tupu efere tectonics nabatara ndị ọkà mmụta sayensị obodo, onye sayensị bụ Alfred Wegener tụpụtara tiotọ banyere kọntinent kọntinent. Ọ dabere na njem na-agagharị agagharị nke kọntinent. Ọ chịkọtara ọtụtụ ozi nke kọwara ọtụtụ obi abụọ banyere ọdịdị kọntinent na nkesa nke ụdị anụmanụ na osisi.
A gbakọtara ihe akaebe Paleoclimatic nke gosipụtara ụdị ihu igwe dị na nnukwu mba a maara dị ka Pangea. A chọpụtakwara anụmanụ ndị ọzọ dịrị n'otu kọntinent na nke ọzọ na ọ bụ n'ihi na tupu ala ndị ahụ enwee otu ala.
Igwe ndọta nke ụwa nwekwara nnukwu mkpa n'ihi echiche nke nghazi nke okwute na mineral. A nabatara echiche a ọtụtụ afọ mgbe Wegener nwụsịrị. O sina dị, A kọwaghị ihe mere kọntinent ahụ ji kwaga. Nke ahụ bụ, kedu ihe kpatara kọntinent ahụ ga-eji gafee akụkụ ala niile. Azịza ya bụ nke teknụzụ efere.
Gha ahụ bụ n'ihi nnabata na-aga n'ihu nke ihe ọhụrụ site na akwa ahụ. A na-emepụta ihe a n'ime oke osimiri. N'ụzọ dị otú a, ihe ọhụrụ ahụ na-akpa ike dị adị ma na-eme ka kọntinent gbanwee.
Dị ka anyị kwurula, tiori a na-emeju ma na-akọwa n'ụzọ zuru ezu kọntinent. Naanị ihe ọ dị mkpa bụ ịmata nke bụ engine nke mere ka kọntinent ndị ahụ na-agagharị.
Kọntinent jikọtara ọnụ ma ọ bụ kewaa, oké osimiri meghere, ugwu gbagoro, ihu igwe na-agbanwe, na-emetụta ihe a niile, n'ụzọ dị oke mkpa na ntopute na mmepe nke ihe ndị dị ndụ. A na-emepụta ihe jikọrọ ọnụ na mmiri. Ogbugbo a nwere nwayọ nwayọ nwayọ. Ya mere nwayọ nwayọ na ọ na-eto kilomita ma ọ bụ abụọ n'otu afọ. Agbanyeghị, uto a na-aga n'ihu na-eme ka akụ́kụ́ ndị dị n'akụkụ ebe a na-egwu n'oké osimiri bibie na nkwekọrịta ga-amalite n'etiti kọntinent.
Omume ndị a niile na-agbanwe enyemaka nke ụwa. N'ihi mmegide ndị a na mmegharị nke efere ndị a E kere ọtụtụ mmiri na oké osimiri na nnukwu ugwu di ka Himalaya.
Ndabere nke tiori
Dị ka usoro nke plate tectonics si kwuo, o mejupụtara akụkụ ụwa bụ́ ọtụtụ efere ndị na-aga n'ihu. A na-akwado mgbochi ndị a site na oyi akwa nke nkume na-ekpo ọkụ ma na-agbanwe agbanwe. Na-echeta n'ígwé nke ụwa anyị nwere ike ịhụ na na uwe elu ahụ enwere convection ugbu a kpatara mgbanwe njupụta nke ihe.
Inghụ na njupụta nke ihe ndị ahụ dị iche, nkume ndị ahụ malitere ịgbanwe site na nke kachasị na nke kachasị. Dika odi ike nke ikuku, mgbe ikuku buru ibu, ọ ga-aga ebe ahụ ebe ọ na-adịchaghị njọ. The ije mgbe niile bụ otu.
Ọfọn, mmegharị na-aga n'ihu nke iyi iyi ndị a nke uwe mgbokwasị ahụ bụ ndị ahụ, ebe ọ bụ na ngwakọta nke ihe ndị efere na-adị na ya na-agbanwe, nke na-eme ka ha na-aga n'ihu.
Ndị ọkà mmụta banyere ala ekpebisibeghị ike otu ụzọ abụọ a si emekọrịtaMa echiche ndị kasị bụrụ garde na-ekwu na ngagharị nke ihe ndị ahụ gbazere awụ, nke a wụrụ awụ na mbara igwe, na-eme ka mbadamba mbadamba ahụ ịkwaga, ma ọ bụ rịa elu.
Iji ghọta nke ọma, okpomọkụ na-arị elu. Na ihe omimi nke mbara ala, ikpo oku pere mpe karịa oyi, yabụ na ọ na-arị elu mgbe niile ma jiri ihe ndị nwere ume dochie ya. Yabụ, n'etiti ngụkọta nke mmiri iyi nke uwe mgbokwasị ahụ na nrụgide nke ọmụmụ nke akụ mmiri ọhụrụ, efere ndị ahụ na-aga n'ihu.
Otu ụkpụrụ ahụ metụtara nkume dị ọkụ nke dị n'okpuru ụwa: wụrụ awụ uwe mgbokwasị adahadeebe ihe oyi na nkụ siri ike na-emikpu na ala.
Pesdị ụdị efere tectonic
Ngagharị nke mbadamba tectonic dị oke nwayọ dịka anyị kwuburu na mbụ. Naanị ike ịkwaga n’otu ọsọ gaa ihe dị ka kilomita 2,5 n’afọ. Ugba a yiri obere ka mbọ mbọ a na-eto.
Ngagharị nke mbadamba ihe niile abụghị otu ụzọ, ya mere, enwere ọtụtụ nkwekọrịta ọ bụla na iduga ala ọma jijiji n'elu. Ọ bụrụ na egwu ndị a emee n'oké osimiri, mbufịt na-eme. Nke a bụ n'ihi nkukota nke mbadamba osimiri abụọ.
Ihe omume niile a na - eme n'ike n'ike na efere ndị ahụ. Uzo a bu ihe anaghi amaghi ama, ya mere, odighi ekwe omume iburu uzo mbu nke ala oma jijiji.
Typesdị mmegharị dị:
Usoro dịgasị iche: Ọ bụ mgbe mbadamba abụọ kewapụrụ ma mepụta ihe a na-akpọ ntụpọ (oghere dị n'ime ụwa) ma ọ bụ oke ugwu dị n'okpuru mmiri.
Mgbanwe mgbanwe: O bu mgbe efere abuo biakutere onu, udiri nkpari na-emikpu na nke buo ibu. Nke a na-emepụta ugwu ugwu.
Eji ije ma ọ bụ nkesa: Efere abụọ ahụ na-amị ma ọ bụ na-amị n'akụkụ ọzọ. Ha na-ebute ọdịda.
Ozugbo ndị a maara ihe a, ndị sayensị nwere ike ikwu na ala ọma jijiji ụfọdụ ga-eme ma ọ bụ kwuo ihe ga-eme ka kọntinent ahụ kwaga mgbe ọtụtụ puku afọ gachara. Ọ bụkwa na mmegharị dị ugbu a nke kọntinent ahụ ga-esi na ibe ha pụọ. Agbanyeghị, Strait nke Gibraltar ga-ezu oke emechi na 150 nde afọ na Oke Osimiri Mediterenian ga-apụ n'anya.
Enwere m olileanya na ị masịrị nkwupụta nke tectonics plate ma mụta ihe karịa gbasara ụwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Echiche tectonics tiori